अहिले देश चुनावमय छ, लामो समयको पर्खाइ र अत्यन्तै फरक पृष्ठभूमिमा हुँदै गरेको चुनाव नेपाली नागरिकका लागि प्राणवायुका रूपमा छ । तर यो प्राणवायु कतिको स्वच्छ हुन्छ, त्यसले नागरिकलाई आउँदा दिनमा निरोगी बनाउँछ वा रोगी, अहिले नै भन्न सकिन्न ।
नेतृत्व दिए पो सक्षम
स्थानीय चुनाव नजिकिँदै जाँदा महिला उम्मेदवारको चर्चा जति चुलिएको छ, त्यो भन्दा बढी उनीहरुको सक्षमता र योग्यतामा प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
नेपालका राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व सार्वजनिक रुपमा जति महिलामैत्री देखिन्छ, व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो छ भन्ने कुरा एकपटक हैन पटक, पटक प्रमाणित भइसकेको कुरा हो ।
नेपाली राजनीतिलाई अहिले मार्गदर्शनको खाँचो छ । यो महिला नेतृत्वले मात्र दिनसक्छ । यो कुरा पुरुष नेतृत्वले बुझ्न ढिलो भइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले कुनै राजनैतिक हस्तक्षेप बिना निष्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादन गर्नु के असक्षमता हो ?, भष्ट्राचार गर्ने व्यक्ति उपर सजाय गर्नु र भ्रष्ट्राचारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने कार्य के खराब आचरण हो ? सरकार र नेताको गुलामी नगरौ संविधान र कानुन सम्मत काम गर्नु के इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको हो ? यो कस्तो विडम्वना !
खासगरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर उम्मेदवारी दिँदा एक पदमा मात्रै महिला उम्मेदवारी दिए पुग्छ । एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवारी दिनैपर्ने अनिवार्यता हुँदैन । यदि यस्तो कुनै गठबन्धन कायम गरियो भने सबभन्दा ठूलो नोक्सान महिला सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व स्थापनाको चालू उत्साहजनक प्रक्रिया, अभ्यास र परिणाममा नै हुन जान्छ ।
२५० रुपैयाको धरौटीमा महिला, दलित, अल्पसख्यकलाई ५० प्रतिशत छुट दिएको छ भनेर खोक्नु भन्दा निर्वाचन आयोग र दलहरूले चुनाव मितव्यायी गर्न कडाइ गर्नुपर्छ । सम्पतीमा पहुँच नभएकाले पनि चुनाव लड्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ।
रविना फुयाल सँगै हुर्के बढेकी साथीको बिहेको खबर सुनेर गौरी अचम्म मानिरहेकी थिई भने आफूलाई आएको प्रस्ताव पनि मनन गर्दै थिई। सानैदेखि सँगै स्कुल जाने आउने मात्र होइन, उनीहरू सँगै गृहकार्य गर्थे । घास दाउरा गर्न जंगल जाँदा पनि सँगै हुन्थे। दुवैले एस।एल।सी राम्रै अंकले उत्तीर्ण गरे । उमेर पनि फरक थिएन उनिहरुबिच । दुवै […]
मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला हिंसाको चपेटामा
महिला माथिको हिंसा सम्वन्धि उजुरी गर्न जादा प्रहरीबाट असहयोग हुने, पिडकलाई राजनैतिक संरक्षण गर्ने जस्ता समस्याहरु पनि छन् । यस्ता मुद्धाहरुमा राजनितिकर्मि, सरकारी निकाय र सरोकारवाला संघसंस्थाहरु उदासिन रहनुले पनि महिला माथि व्यवसायिक रुपमा हुने यौन दुव्र्यवहार घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको देखिन्छ ।